अमेरिकामा ३ जना अमेरिकी युवतीले नेपाली ट्याक्सी चालक माथि गरे यस्तो दु.र्व्यवहार, रेकर्ड भयो सबै ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 11, 2021 March 11, 2021 AdminLeaveaComment on अमेरिकामा ३ जना अमेरिकी युवतीले नेपाली ट्याक्सी चालक माथि गरे यस्तो दु.र्व्यवहार, रेकर्ड भयो सबै ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
अमेरिकामा ट्याक्सी चलाउदै आएका एक नेपाली युवामाथि युवतीहरुद्वारा दु.र्व्यवहार भएको छ । अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा नेपाली उबर चालक ३२ वर्षीय शुभाकर खड्कामाथि तीन युवती यात्रुहरुले दु.र्व्यवहार गरेका हुन।
उबरको नियम अनुसार यात्रुहरुले मास्क लगाउनु पर्ने हुदा यी नेपाली युवाले ती युवतीलाई मास्क लगाउन आग्रह गरेपछि ती युवतीहरुले दु.र्व्यवहार गरेका हुन् । युवतीहरुले गरेको दु.र्व्यवहारको सम्पूर्ण दृश्य युवकले आफ्नो क्यामेरामा कैद गरेपछि उक्त भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ।
उनीहरुले शुभाकरमाथि खोक्नुका साथै अ.पशब्दहरु बोलेको र गाडीबाट निस्कने बेला खुर्सानीको धुलोवाला स्प्रे छर्केको शुभाकरले बताएका छन। उनले मार्च ८ का दिन अमेरिकाको सान फ्रन्सिस्कोको बेभ्यू क्षेत्रबाट ती तीन यात्रुलाई गाडीमा चढाएका थिए । शुभाकरका अनुसार मास्क लगाउँन अनुरोध गर्दा एक महिला यात्रु अ.पशब्द बोल्दै उनीमाथि झम्टन आएकी थिइन। लगत्तै ती महिला उनीमाथि खोक्न थालिन।
दक्षिण एसियाली मुलको भएको थाहा पाएकाले ती महिलायात्रुले आफूमाथि दु.व्र्यवहार गरेको शुभाकरको भनाई छ। भिडियोमा ती युवतीहरुले उनलाई गा.ली गर्ने, उनको अगाडि मासक हल्लाउने, उनलाई कु.टपि.ट गर्नेदेखि उनको फोन चो.र्ने प्रयास गरेको समेत देखिएको छ । यो घटनापछि सुभंकरले केही दिनको विदा लिएको बताइएको छ ।
यस घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । युवकले रेकर्ड गरेको भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस ।